Dhageyso: Xildhibaan Baraf Oo Ka Tirsan Baarlamanka KGS Oo Qoonsadey Is Barbar Dhig IdaleNews Ay Ku Sameysay Halada Xildhibaan Xasan Black – idalenews.com
Dhageyso: Xildhibaan Baraf Oo Ka Tirsan Baarlamanka KGS Oo Qoonsadey Is Barbar Dhig IdaleNews Ay Ku Sameysay Halada Xildhibaan Xasan Black
Baydhabo (INO)- Xildhibaan C/ qaadir Cabdiraxmaan (Baraf) oo ka mid ah Mudanayasahsa Baarlamanka Dowlada Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa Qoonsadey Hadalo uu yiri Xildhibaan Xasan Balack oo is barbar dhig ay ku sameysey Shabakada Madax banaan Ee IdaleNews.com, hadalaas oo mar uu ku daraayao Shariif Xasan Sheekh Aaden marna uu ku wereeraayo Xildhibaanada Hada wada Mooshin ka dhanka ah Shariif Xasan.
Xasan Balack ayaa mar yrir ” “Intii Madxweynahan, Gudoomiyaha Baarlamanka iyo Wasiiradan ay Jiraan Koonfur Galbeed Soomaaliya ma qaboobeyso”
Xildhibaan C/ qaadir Cabdiraxmaan (Baraf) Ay shabakadan IdaleNews.com ku eedayey faafinta warkaas, isagoona dhinac kale ka dalbadey inay ka bixiso raali galin buuxda.
Hadaba Mudane Xildhibaane Shabakada IdaleNews waa warbaahin hufan iyo xog-waran dhexdhexaad ah oo u diyaarsan iney Bulshada u gudbiso warar dhab ah dhacdooyin xiiso leh oo xaqiiqda ku saleysan kuwaasoo ka dhaca dalka gudahiisa iyo dibadiisa, marna inoo suurtigaleyso in aan beegsano Shakhsi iyo Koox,isla arkaaana shaqaadeeda looma Joojinaayo qof ama Koox Hanjtey.
Idale News Online ayaa inta badan waxay bulsahda Koonfur Galbeed ee wax aqrista tustaa Xogaha Dahsoon iyo dhaqaro loo wado Bulshadaas taasoo dhibta Mas’uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya.
IdaleNews ayaa waxay haysa 6 Dhacdo oo hanjabaad ah ay hawada ay u soo mariyeen Mas’uuliyiin kala gedisan oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya Kuwaaso qaar ugu hanjabey inay Joojiso Guud ahaan Tababinta Wararka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka jira, Qaar xarig iyo qaarna dil.
Dhageyso:Xildhibaan Dalxa oo ka warbixinaya waxa ay Somalia iga dhigan tahay go’aankii Maxkamada ICJ